Vola Bebe Kokoa, Olana Bebe kokoa ? Manokatra Ny Varavarany Ho Amin’ny Fandraharahana Shinoa Misimisy kokoa i Taiwan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Febroary 2014 19:54 GMT
Hetsi-panoherana manohitra ny Fifanarahana Fifampivarotana Tolotra natao ny volana Jolay 2013. Sary avy amin'ny coolloud.org. CC: NC.
Ny governemanta ao Taiwan sy ny governemanta Shinoa dia nanasonia fifanarahana maro ara-toekarena nanomboka ny taona 2000, niaraka tamin'ilay fifanarahana farany “Fifanarahan'i Cross-Strait momba ny Fifampivarotana Tolotra” nosoniavina ny volana Jona 2013. Raha natao miafina ny fifanarahana nifanaovan'ny governemanta roa tonta, dia maro kosa ireo niahiahy ny amin'ny maha-loza mitatao amin'ny kolontsaina, ny fahalalahana maneho hevitra ary ny fiandrianam-pirenena io fidiran'ny renivola avy amin'ny tanibe ao io, na dia tsena goavana ho an'i Taiwan aza i Shina.
Mba hampitoniana ireo ahiahy maro, ny fikambanan'ny mponina Mandatehezana Demokratika Manohitra ny Fifanarahan'i Cross-Strat momba ny Fifampivarotana Tolotra dia nitarika hetsi-panoherana maro ary nandresy lahatra ny Paremanta Yuan, mba hikarakara fakàn-kevitra avy amin'ny daholobe [zh] momba ilay Fifanarahana Fifampivarotana Tolotra nosoniavina [zh] ny volana Jona 2013.
Natomboka tao amin'ny Parlemanta Yuan ilay fakàn-kevitra avy amin'ny daholobe ny volana Novambra 2013. Hatramin'izao, efa 14 ireo efa nokarakaraina ary olona maro avy aminà sehatra maro no efa nasaina nanome ny heviny. Ilay adihevitra misokatra dia nanetsika ny fahalinan'ny olona tamin'ny fiantraika ara-politika sy ny vokatra aterak'io fifanarahana ara-toekarena io. Maro be ireo olona sy ireo voakasika tamin'izany no naka ilay adihevitra ho ao amin'ny blaoginy sy ny vohikalany manokana.
Fifanarahana tsy mazava
Taorian'ny namerenany nandinika ny voambolana nampiasaina tao amin'ilay fifanarahana ara-barotra nosoniavin'i Taiwan sy Shina, i Profesora Show-Ling Jang avy ao amin'ny Lalam-piofanana Toekarena ao amin'ny Oniversitem-pirenen'i Taiwan dia nanamafy [zh, pdf] fa noho ny tsy fitoviana ara-toekarena goavana misy eo amin'ny firenena tsirairay avy sy noho ireo “Fitsipika miafina” fonosin'ireo teny ampiasaina ao aminy, dia sady tsyrarin no mitanila ilay fifanarahana :
Maro dia maro ireo fepetra miafina ao Shina ary tsy afaka ny hanao lalao madio ao Shina mihitsy noho izany ireo vahiny mpifaninana. Ohatra, ao amin'ilay Fifanarahana Fifampivarotana Tolotra, ny fitsipika ao anatiny dia mitaky [ ireo mpampiasa vola vahiny] hanangana fiaraha-miombon'antoka sy hifampizara ny fananany amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminy avy ao amin'ny tanibe. Ny fifanarahana toy izany dia hanery ireo vondron'orinasantsika hampita ny teknolojiany sy ny fahaiza-manaony amin'ireo Shinoa mpiara-miombon'antoka aminy.
Fanampin'izany, ny renivola Shinoa dia tsy tena ao amin'ny resaka varotra madiodio rehefa miditra any Taiwan. Misy ny fijerena ny lafiny ara-politika sy ara-tetikady. Tena tsy rariny ny fanokafan'ny governemanta ao Taiwan ireo tolotra mahakasika ny filaminam-pirenena, toy ny lafiny serasera sy ny Fitaterana [ho an'ny renivola sy ny fampiasam-bola Shinoa].
Fampihomehezana ara-politika mikasika ny “fifanarahana miafina” nosoniavin'ny governemanta ao Taiwan sy i Shina nataon'i etblue
Mamefy ny fahalalahana haneho hevitra ny fampiharana ny sivana
Ny fomba fanaon'ny Governemanta Shinoa sy ireo sivana ami'ny fanehoan-kevitra ataony dia tena nampiahiahy be ihany ireo Orinasa fanontàna gazety/boky ao Taiwan. Nandritra ilay fakàna ny hevitry ny vahoaka, efa maro ireo mpanonta sy tomponà fivarotam-boky no nino fa tsy maintsy hiafara amin'ny famefena ny fahalalahana hiteny ao Taiwan ihany io fifanarahana io. Ohatra iray amin'izany ny tomponà trano fivarotam-boky kely iray, Shiao-Shiao, izay nilaza [zh] tao amin'ilay fakàn-kevitra fa raha toa ireo mpanoratra ka tsy manaraka ny sivana napetrak'i Shina dia tsy hivoaka any amin'ny tanibe Shina velively ny boky nosoratan'izy ireo :
Manana fanaraha-maso henjana amin'ny resaka fanontàna boky ny governemanta Shinoa amin'ny maha-vondron'orinasa nasionaly ny mpanonta rehetra ao Shina. Mila mividy “Laharam-boky” avy amin'ireo vondron'orinasa nasionaly ireo Orinasa tsy miankina vitsivitsy mpanonta boky ao an-toerana. Tsy misy hirika mihitsy hamelàn'ny governemanta ao Shina ireo mpanonta boky avy ao Taiwan hiditra ao Shina. Raha toa kosa ho an'i Taiwan, manome tombon-dahiny ho an'ireo goavana amin'ny fanontàna ny politikan'ny Governemantantsika, [vantany vao misokatra fotsiny ho an'ny renivola Shinoa] hisy fiantraikany amin'ny fahasamihafana ara-kolontsaina ao Taiwan izany.
Ny tena marina, araky ny efa nambaran'ilay talen'ny Famokarana horonan-tsary, Hong-Hong, tamin'ny vao nidirany tao Shina, dia efa nanomboka nanao sivana ny tenany ireo Orinasan'ny kolontaina Taiwan :
Tsy firenena malalaka sy demokratika i Shina. Tato anatin'ny taona vitsy, maro ireo avy ao Taiwan no niasa tamin'ny orinasa mifandray amin'ny resaka kolontsaina tao Shina, ary iarahantsika mahita amin'izao ny fomba fanaovan'izy ireo sivana ny zavatra avoakany.
Fu-Yi Chou, ilay TAle Jeneralin'ny “Laiho Culture Foundation and Museum”, dia nanolotra soso-kevitra tao amin'ilay fakàna ny hevitry ny daholobe mahakasika ny fanesorana ireo Orinasa misahana ny ara-kolontsaina ao amin'ilay fifanarahana :
“L’exception culturelle” na ny “Ny fiavahana manokana ara-kolontsaina” dia lasa fifanarahana maneran-tany ankehitriny. Frantsa sy Canada no nitarika ilay adihevitra tao amin'ny UNESCO ary nanaiky ilay fifanarahana mikasika ny Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions ( Fifanarahana amin'ny Fiarovana Sy Fanomezana lanja ny Fahasamihafana Fanehoan-kevitra Ara-kolontsaina) ny taona 2005. Raha toa ka efa mihatra manerana izao tontolo izao ny “exception culturelle”, maninona izany no hodian'ny governemantantsika tsy hita? Maninona ny Minisitry ny Kolontsaina no tsy mba nilaza ny momba izany akory ? Araka izany, inona no antony tokony iresahantsika ny momba ny firenena iray mifototra amin'ny kolontsaintsika ?
Fandrisika Ara-politika Ary Loza Mitatao Ho An'ny Filaminana Noho ny Varotra
Araka izany, tena mifanakaiky tokoa ny tontolon'ny Fandraharana sy ny governemanta ao Shina ka matetika ny sehatra ara-toekarena dia mifamatotra akaiky aminà tanjona ara-politika hatrany. Yu-Tsang, enjienera sady bilaogera iray, no nanaraka ny adihevitra tao amin'ilay fakàn-kevitra ary naneho ny ahiahiny tao amin'ny bilaoginy mikasika ny ambadika politika hoentin'i Shina amin'ny fampiasany vola ao Taiwan :
Raha raisintsika ny fomba fijery ara-politika, mety hamatsy vola ireo vondron'orinasa ao aminy ny governemanta Shinoa mba hahafahan'izy ireo mampiasa vola ao Taiwan. Ny tena marina, mety mitombina ny hoe ny politika no tanjona voalohan'ireo vondron'orinasa Shinoa ao Taiwan. Noho izany, zava-dehibe ny misoroka ny famatsiam-bola ara-politika rehefa miresaka momba ny Fifanarahana Fifampivarotana Tolotra amin'i Shina isika.
Misy mihitsy aza ireo manahy fa ho tandindonin-doza ny fiainana manokana sy ny filaminam-pirenena rehefa miditra amin'ny indostrian'ny tolotra aterineto ireo vondrn'orinasa Shinoa. Profesora Ying-Dar Lin avy ao amin'ny Oniversite nasionaly Chiao-Tung dia nanome fampitandremana ny governemanta ao Taiwan :
Azo atao tsara ny manokatra varavarana hafa hidirana amin'ny fotodrafitrasan'ny tambajotra iray (ho an'ireo sampam-pitsikilovana) handinganany ireo mpanome tlotra aterineto ka hangalarany ny rakitra momba ireo mpanjifa sy hanarahay maso ny fifandraisan'ireo mpisera nokinendriny manokana.
Apetraka aloha ny fanahiana ara-politika, koa satria ny toekarena ao Taiwan dia ivondronan'ireo orinasa madinika sy salantsalan raha toa kosa ireo orinasa hafa mitovy aminy avy any amin'ny tanibe ka vondron'orinasam-panjakana vaventy, ny elanelana eo amin'ny lanja ara-toekarena dia miteraka fahasarotana amin'ny hisian'ny seha-pilalaovana isian'ny fitoviana. I Profesora Show-Ling Jang no nanazava toy izao [zh] :
Ao Taiwan, ny sehatry ny tolotra dia ahitàna orinasa miisa 935.000. 86 isan-jatony no mamatsy tolotra tsy dia ilàna fari-pahaizana manao ahoana loatra ary ny salan'isan'ny mpitantana ao amin'izany orinasa izany dia 4,2. Raha ampitahaina amin'i Etazonia (mpitantana 15 ) ary i Japana ( mpitantana 8,6 ), tena orinasa madinika avokoa ny ankamaroan'ireo orinasantsika.
Mitovy ny teny ampiasaina ny ao Taiwan sy Shina, ary mifanakaiky tokoa isika raha ny ara-jeografia no jerena. Kanefa, tsy mitovy mihitsy ny toerana eo amin'ny sehatra ara-toekarena sy ny asa. Hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny tsenan'ny asa sy ny rafitry ny karaman'ireo mpiasa ny fitosahan'ny renivola goavana sy ny karama ambany any Shina.
Varavarana ho amin'ny fifindra-monina
Koa satria manome alalana ny vondron'orinasa ao Shina hampiditra mpiasa maro avy any ivelany ilay fifanarahana araky ny haben'iny fampiasam-bolan-dry zareo, dia maro ireo manahy hoe hamorona fifindra-monina Shinoa mihoapampana hankao Taiwan izany. I Profesora Show-Ling Jang dia nanazava ny mety hahalasa iny fifanarahana iny ho varavarana misokatra ho amin'ny fifindra-monina :
Miainga amin'io fifanarahana io ihany, ny vondron'orinasa Shinoa iray dia afaka ny hanao izay hemetrahana mpiasa roa ao Taiwan raha toa ka mahatratra hatramin'ny 200.000 Dolara Amerikana ny vola ampiasainy, ary afaka ny hametraka mpiasa maro kokoa izy ireo raha toa ka mampiasa 500.000 Dolara Amerikana isaky ny olona hatramin'ny fito ry zareo. Raha oharina amin'ny fepetra fifindra-monin'ny mpiasa any amin'ny firenen-kafa, dia toa malefaka ihany ireo fepetra nolaniana ao anatin'ity fifanarahana ity… Satria tsy misy famerana ara-pahalalana sy famerana amin'ny fahafahana mivahiny ho azy ireo, dia miasa ho toy ny fantsona ahafahana mifindra monina “ho azy” io.
Nosoniavina ny volana Jona 2010 ny Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) na ny Fifanarahana Fiaraha-miasa eo amin'ny Sehatra Ara-toekarena eo amin'ny Taiwan sy Shina, izay narahan'ilay Fifanarahana Fampiasam-bola teo amin'ny roa tonta nosoniavina ny volana Aogositra 2012. Ary ny fifanarahana farany dia ilay Fifanarahana Fifampivarotana Tolotra nosoniavina ny volana Jona 2013. Araky ny fanadihadiana tet anaty aterineto nataon'ny fikambanana iray, Big Citizens Is Watching You, amin'ireo 61,6 isan-jaton'ny olona 2259 nanontaniana mikasika ilay Fifanarahana Fifampivarotana Tolotra, dia maherin'ny 97,5 isan-jato ireo tsy mankasitraka izany, 38,1 no tsy mahalala na inona na inona mikasika izany fifanarahana izany, 0,3 isan-jato no tsy manan-kevitra, ary 1,6 isan-jato monja ireo mahalala sy mankasitraka izany.
Mihaika ny lalàna vaovao nolaniana momba fiarovam-pirenena tamin'ny fihetsiketsehana tsy misy mpitarika ny Hongkongers
1 herinandro izayVietnam